Ukubuyekezwa Komthombo We-Psychic - Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Ukubukeza Umthombo We-Psychic
Ukubukeza Umthombo Ophelele We-Psychic
Umthombo we-Psychic has, kude, Ama-Psychics amahle kakhulu engikhulume nawo. Ingenye yezinsizakalo ezindala kakhulu, ezihlonishwa kakhulu zengqondo kwezamabhizinisi. I-Psychic ngayinye ihlolwa ngokuqinile kanye nezitifiketi ngaphambi kokuthi i-Psychic Source izivumele zinikeze ukufundwa. Izangoma zabo zinohlu olukhulu lobufakazi obuvela kumakhasimende anelisekile, futhi akumangalisi. Bahlala behlinzeka ngokufundwa okunembile futhi angikaze nakanye ngizwe sengathi ngangihlelelwe umkhonyovu. Ukhokhela kusengaphambili ukufundwa kwakho ukuze ungalokothi uthole izindleko zokumangala. Ama-psychics emthonjeni we-Psychic nakanjani kufanele ahlole. Ngaphezulu kweminyaka engama-25 edlule Umthombo wePsychic wethule ukufundwa kwawo kokuqala kwengqondo ngocingo. Manje banikela ngocingo, ukuxoxa ngomyalezo osheshayo nokufundwa kwe-imeyili. Umthombo wePsychic usanda kufaka into entsha yokuthumela imiyalezo evumela ukuthi uthumele umbhalo kunombolo ye-1800 futhi ukhulume nommeleli obukhoma! Yizame, mane uthumele umbhalo ku-866-326-0193 (amanani akho ejwayelekile wombhalo azosebenza yebo).
Ibhizinisi labo elincane eliphumelelayo lenziwe ngemigomo emibili elula:
• Vele usebenze nabafundi abanamakhono abanempilo, abanokwazi ukukholwa ngezipho zabo.
• Yenza wonke amakhasimende ngendlela efanele futhi ngenhlonipho.
Abafundi babo be-psychic yibo abahlukanisa. Benze inqubo eqinile yokuhlola efaka izingxoxo nokufundwa kokuhlolwa. Wonke umuntu ongaba umfundi kumele abe nokufundwa kokuhlolwa futhi avunyelwe ngomunye wemilingo yakhe efakazelwe. Isisho esidala esithi "Kuthatha umuntu ukuthi azi eyodwa" siyiqiniso uma kukhulunywa ngokuhlonza izangoma ezinekhono ezingaletha ukufundwa okunenjongo.
Umthombo we-Psychic Inenqubo ephelele yokuhlola ngemilingo kuzo zonke izinsizakalo zengqondo engizisebenzisile. Cishe i-psychics eyodwa kwengu-1 esebenza kuMthombo wePsychic avunyelwe ukunikeza ukufundwa kwensiza. Inqubo yokuhlola inzima futhi ifaka isheke langemuva, izingxoxo eziningi, futhi kufanele zinikeze ukufundwa kwengqondo bukhoma nomfundi oqinisekisiwe wamanje ohlola amakhono abo. Ngenxa yalolu hlelo cishe ungaqinisekisa kuphela amaPsychics amahle kakhulu asebenza lapho.
Iwebhusayithi yomthombo we-Psychic
Umthombo we-Psychic muva nje ngivuselele iwebhusayithi yabo futhi ngiyayithanda impela. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, futhi ungasesha izangoma ngamagama, noma isandiso sefoni. Uma ungazi ukuthi iyiphi i-psychic ongayikhetha ungahlunga uhlu ngamakhono abo e-psychic, noma ngabe ayatholakala ukuthatha izingcingo, izilinganiso zamakhasimende nokuningi. Umthombo wePsychic uvumela amakhasimende ukuthi ashiye imibono nezilinganiso ukuze ubone ukuthi amanye amakhasimende akuthanda kanjani ukufunda kwawo.
Umthombo we-Psychic unesipho esikhethekile samakhasimende amasha. Amakhasimende amasha angathola imizuzu ye-10 nge-$ 10 kuphela. Ungathenga amaminithi angu-30 kule ntengo ekhethekile. Ngaphezu kwalokho wonke amakhasimende amasha athola imizuzu eyengeziwe ye-3 mahhala ngokuthenga. Konke Umthombo we-Psychic Amalungu athola futhi izinkanyezi zansuku zonke nge-imeyili kubo mahhala. Ama-horoscopes abo abhalwa ochwepheshe bezinkanyezi nabahlakaniphile. Ngabathola bewusizo kakhulu futhi manje ngibheke phambili kubo e-mail yami nsuku zonke. Ngincoma ukuthi ubhalisele iphephandaba labo. Ibhulogi labo liqukethe isaphulelo samakhuphoni, kanye nezinye izipesheli ezibhalwe ngabathengi bezindaba kuphela. Ngonyaka odlule mina banginike imizuzu yamahhala ngosuku lwami lokuzalwa.
Isevisi yamakhasimende yilapho Umthombo we-Psychic idlula ngempela wonke umuntu. Umthombo wePsychic uqala ngokunikela ngesiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100%. Isiqinisekiso sithi uma unganelisekile ngokuphelele ngomfundi wakho we-psychic, noma ukufunda abakunike kona vele ubabize futhi bazokunika imali egcwele noma bakusize uthole umfundi onengqondo kangcono. Banikezela ngosizo lwefoni ne-imeyili amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngeviki. Ukwesekwa kwamakhasimende abo akususelwa e-USA, futhi ngibathola bengagcini nje ngokuba nenhlonipho futhi benenhlonipho kepha empeleni bebekhathalela izingqinamba ezimbalwa enganginazo futhi basebenza kanzima kakhulu ukungenza ngijabule. Babenolwazi olunzulu kakhulu ngamaPsychics futhi baphakamisa nokuthi abafundi abambalwa abahle bazame. Uma lokhu kungukufunda kwakho kokuqala kwe-Psychic okungakusindisa isikhathi esiningi uzama ukukhetha umfundi ofanele.